Makakatanwa Ekushandisa Zviri Pamutemo Zita reMDC Atanga
MDC Alliance Logo
Mapato anopikisa maviri, eMDC-T neMDC Alliance, atanga zvekare kukandirana makobvu nematete achirwira zita rekuti MDC Alliance.
Mutauriri weMDC-T, inotungamirwa naVaDouglas Mwonzora, VaLlyod Damba, vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yakaumbwa nebato reMDC, apo vaimbove mutungamiri webato iri, muchakabvu Morgan Tsvangirai, vakakoka mapato anokwikwidza kuti abatane mukubvisa pachigaro bato reZanu-PF, vachiti naizvozvo, MDC Alliance chizvarwa cheMDC-T.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatywayo, vanoti izvi ndezvekurota.
VaHlatywayo vanoti zviri pachena kuti VaMwonzora vari kutadza kutungamira bato ravo naizvozvo, nguva zhinji , vanotsvaka nzira dzekuba zvirongwa zvaitwa neMDC Alliance pamwe chete nekuvhiringa vanhu vakasarudzwa kupinda mudare reParamende nemumakanzuru vari pasi peMDC Alliance.
Asi mutauriri waVaMwonzora, VaDamba, vanoti zvekushandisa zita rekuti MDC Alliance kwebato raVaChamisa zvave kusvika kwamvura yacheka makumbo.
VaDamba vanoti zviri pachena kuti hakuna chinonzi MDC Alliance, vachiti MDC-T yakatora muzinda weMDC, ikadzinga vamiriri veMDC Alliance muparamende nemumakanzuru asi avo vanozviti iMDC Alliance vakatadza kudzivirira kuti zvisaitika nekuti hakuna chinonzi MDC Alliance.